Bhuku rino ane chitsauko rose vakawanda kutsigirana, asi bhuku iri pacharo vakawanda kubatsirana. Zvikuru kungoti bhuku rino haana kurarama dzakanga pasina rupo nokutsigira vakawanda zvinoshamisa vanhu uye masangano. Nokuti, ndiri chaizvo chaizvo.
Vanhu vazhinji akapa inofambiswa anenge mumwe chete kana kupfuura muzvitsauko izvi kana akanga akatambanudzirwa nhaurirano neni pamusoro bhuku. Ndinoonga Solon Baracas, Tom Boellstorff, Clark Bernier, Michael Bernstein, Megan Blanchard, Josh Blumenstock, Dalton Conley, Yo-Yo Chen, Ethan Fast, Nick Feamster, Cybelle Fox, Maggie Frye, Sharad Goel, Jake Hoffman, Joanna Huey , Patrick Ishizuka, Ben Jones, Dawn Koffman, Sasha Killewald, Harrissa Lamothe, Andrés Lajous, David Lee, Amy Lerman, Meagan Levinson, Andrew Ledford, Dai Li, Karen Levy, Ian Lundberg, Xiao Ma, Andrew Mao, John Levi Martin, Judie Miller, Arvind Naranyanan, Gina Neff, Cathy O'Neil, Nicole Pangborn, Ryan Parsons, Devah Pager, Arnout van De Rijt, David Rothschild, Bill Salganik, Laura Salganik, Christian Sandvig, Mattias Smångs, Sid Suri, Brandon Stewart, Michael Szell, Sean Taylor, Florença Torche, Rajan Vaish, Taylor Winfield, Han Zhang, uye Simone Zhang. Ini ndingadawo nditende vadzidzi wemagariro evanhu 503 vari Spring 2016 kuverenga vachiri shanduro mupumburu, uye vadzidzi pamapoka angu mumakore avo zvakabatsira chimiro vazhinji pfungwa mubhuku rino.
Ndakanga chinoshamisa bhuku zvinyorwa workshop kuti rakarongwa panguva raionekwa kubudikidza Princeton kuti Center Wokudzidza Democratic Politics. Ndinoda kukutendai Marcus Vasati uye Michele Epstein hwokutsigira musangano. Uye, ndinoda kukutendai mose vechikamu vakatora nguva yavo takabatikana kundibatsira kuvandudza bhuku: Elizabeth bruch and they, Paul DiMaggio, Filiz Garip, Meagan Levinson, Karen Levy, Mor Naamani, Sean Taylor, Markus Vasati, Jess Metcalf, Brandon Stewart, Duncan Watts, uye Han Zhang. It chaizvo raiva zuva anoshamisa, uye ndinovimbawo kuti Ndakakwanisa kuti uwane dzimwe uchenjeri hunobva mukamuri kuti kupinda kwokupedzisira manyoro.
A vamwe vanhu vashoma zvakakodzerwa kuvonga. Duncan Watts aiva zvidzidzo zvangu wemazano, uye raiva tsvakurudzo yangu zvidzidzo Akandiita kuona sei zvinofadza kutsvakurudza mhando ichi chingaitika; pasina chiitiko kuti ndaiva chikoro bhuku rino kungadai kusipo. Paul DiMaggio aiva munhu wokutanga kukurudzira ini kunyora bhuku rino. Zvose zvakaitika rimwe masikati apo takanga vaviri vakamirira kofi Machine muna Wallace Hall, uye ndichiri kuyeuka kuti kusvikira panguva iyoyo, pfungwa kunyora bhuku kumbobvira vakayambuka pfungwa dzangu. Dzimwe nguva apo ndakanga chaizvoizvo kunyora bhuku rino I vakatuka Pauro mazano ake, asi zvino ndiri chaizvo kwaari pokunyengetedza ini zvandakaita chokwadi pane kutaura uye kuti vanhu vaizova vanofarira. Ndingada anofarirawo kukutendai Karen Levy yokuverenga zvinenge zvose zvitsauko zvavo tanga uye messiest nezvimiro; akandibatsira kuona tanidzwa pandakabhabhatidzwa rakabayirwa masora. Ndinoda kukutendai Arvind Narayanan nokundibatsira kutarisa uye kuchenesa nharo mubhuku pamusoro zhinji zvinoshamisa lunches. Brandon Stewart aigara achifara Chat kana kutarisa chitsauko, uye nzwisiso ake uye kurudziro akaramba ini kufambira mberi, kunyange kana ndakanga kutanga kukukurwa padivi. Uye, pakupedzisira, ndinoda kukutendai Marissa King nokundibatsira kukwira musoro kuti bhuku rino chete kuine masikati muNew Haven.
Nepo kunyora bhuku rino, Ini akabatsirwa nokutsigirwa zvitatu zvinoshamisa masangano. Chokutanga, pana Princeton University, Ndinotenda vamwe vangu uye vadzidzi muDhipatimendi wemagariro evanhu kusika uye kuramba noushamwari uye anonditsigira tsika. Ini ndingadawo nditende Center nokuda Information Technology Policy kuti vachindinzvera inoshamisa zvedzidzo musha chechipiri apo ndaigona kudzidza zvakawanda nezvekuti masayendisiti kombiyuta vanoona nyika. Zvikamu zvebhuku rino apo rakanyorwa pandakanga pamusoro resabata kubva Princeton. Chokutanga, ndinoda kukutendai Microsoft Research, New York City nokuti musha wangu 2013-14. Jennifer Chayes, David Pennock, uye boka racho rose munzanga sayenzi computational vaiva anoshamisa Wamasimba uye nevamwe. Chechipiri, ndinoda kukutendai Cornell Tech nokuda kuva musha wangu 2015-16. Dan Huttenlocher, Mor Naamani, uye munhu wose ari Social Technologies Lab akabatsira kuti Cornell Tech akakodzera nharaunda kwandiri kuti ndipedze bhuku rino. Munzira dzakawanda bhuku iri pamusoro tichibatanidza pfungwa kubva date sayenzi uye magariro nesayenzi, uye ndinofunga kuti zvose Microsoft Research uye Cornell Tech muri yemashoko pakati zvedzidzo muchinjikwa-pollination mhando ichi.
Nepo kunyora bhuku rino, ndakanga rakaisvonaka tsvakurudzo rubatsiro kubva kuvanhu vatatu. Ndinoonga Han Zhang, kunyanya rubatsiro rwake kuita calculators mubhuku rino. Ndinoonga Yo-Yo Chen, kunyanya rubatsiro yake kunyora urongwa hwezvinofanira kuitwa mabasa mubhuku rino. Pakupedzisira, ndinoonga Judie Miller, kunyanya nokuda kwake rubatsiro kuverenga uye club pasi nezvinhu kuraibhurari mhando dzose.
Ndakagamuchira inofambiswa dzinobatsira papfungwa mubhuku rino wandei hurukuro. Ndinoda kuti nditende varongi uye vatori vechikamu panguva dzinotevera zviitiko: Cornell Tech Connective Media Seminar, Princeton Center Wokudzidza Democratic Politics Seminar, Stanford HCI Colloquium, Berkeley wemagariro evanhu Colloquium, Russell ripararire Foundation Working Group on Computational Social Science, Princeton DeCamp Bioethics Seminar, Columbia Quantitative Nzira muna Social Sciences Visiting Mukurukuri Series, Princeton Center nokuti Information Technology Policy Technology uye Society Reading Group, Simons Institute for dzidziso Computing musangano New Directions muna Computational Social Science & Data Science, Data uye Society Wekishopu, University of Chicago, wemagariro evanhu Colloquium, International Conference musi Computational Social Science, Data Science Summer School pana Microsoft Research, uye Society kuti Industrial ndikarangarira Mathematics (siam) Musangano Wegore Negore.
Web shanduro bhuku rino akasikwa Ruka Baker, Paul Yuen, uye Alan Ritari of Agathon Group. Kushanda navo pabasa iri zvaifadzawo, sezvo nguva dzose. Mumwe wangu zvinhu kufarira pamusoro zvirongwa zvedu pamwe ndiko kuti ini ndirambe kudzidza kubva collaborations edu. Ndinoda kunyanya vanoda kutenda Luke nekuti kudzidzira tinova muitiro kuti bhuku rino uye achindibatsira kufamba murima makona Git, pandoc, uye kuita.
bhuku rino uye munyaya ino Website vakasikwa zvinoverengeka pachena bhuku muzvirongwa. Ndinoda kukutendai mari anotevera chirongwa: Git, pandoc, pandoc-crossref, pandoc-citeproc, pandoc-citeproc-Okutanga, pfungwa, Middleman, Bootstrap, Nokogiri, GNU Itai, Vagrant, Ansible, LaTeX, uye Zotero. Calculators zvose mubhuku rino vakasikwa R (Team 2016) , uye akashandisa zvinotevera Mabhokisi: ggplot2 (Wickham 2009) , dplyr (Wickham and Francois 2015) , reshape2 (Wickham 2007) , stringr (Wickham 2015) , motokari (Fox and Weisberg 2011) , cowplot (Wilke 2016) , PNG (Urbanek 2013) , afoot (Team 2016) , ggrepel (Slowikowski 2016) , uye emojifont (Yu 2016) . Ini ndingadawo kukutendai Kieran Healy nokuda kwake Blog romukova kuti vakapindira ini akatanga pandoc. Uye, ndinoda kukutendai Arnout Van De Rijt uye David Rothschild nokuda kwokugovera mashoko akashandiswa recreate zvimwe calculators kubva mapepa avo, uye ndinoda kukutendai Josh Blumenstock paakaumba paruzhinji kuberekana mafaira mapepa ake.
Pana Princeton University Press, ndinoda kukutendai Eric Schwartz vaitenda chirongwa ichi pakutanga, uye Meagan Levinson uyo akabatsira kuti zviitike. Meagan zvakanakisisa mupepeti kuti munyori aigona kuva; Ndakanzwa sokuti iye nguva dzose paiva kutsigira chirongwa ichi, munguva dzakanaka uye munguva yakaipa. Uye, zvino kana ndikawana pachangu kupa inofambiswa vamwe, ndinoita nepandinogona napo kuti uwane Style Meagan kuti zvinovaka uye kungwarira.
Pakupedzisira, ndinoda kukutendai shamwari dzangu nemhuri. Wanga vanotsigira chirongwa ichi munzira dzakawanda, kazhinji munzira kuti hamuna kunyange kuziva. Ndinoda kunyanya vanoda kutenda vabereki vangu, Laura uye Bill, uye vabereki mukarahwa wangu, Jim uye Cheryl, nokuti avo haana-kupedza rutsigiro apo chirongwa ichi vakapfuurira zvichingodaro. Ini ndingadawo kutenda vana vangu. Eri Theo, imi makandinzvera akabvunza kakawanda kudaro apo bhuku rangu pakupedzisira apedzwa. Eya, mhinduro zvino. Uye, kupfuura zvakakoshesa, Ndinoda kukutendai wangu mukadzi Amanda. Ndinoziva kuti chirongwa ichi chaisanganisira zvakawanda nemateru nezvisingafadzi, uye ndichaita ndichionga haana-chinja kwako rudo uye kutsigirwa.